မောရှေသည်ထိုကဲ့သို့သောသူ့အဘို့တည်ရှိဘယ်တော့မှအဖြစ်, ပရောဖကျတဖြစ်ခဲ့သည်။ သူက (5 MOS ။ 34:10) "မျက်နှာချင်းဆိုင်သူ့ရှေ့မှာသို့မဟုတ်ပြီးနောက်အဘယ်သူမျှမသခင်ဘုရားသည်သူ့ကိုနှုတ်ဆက်ကြုံတွေ့ခဲ့သည်တစ်ခုခုကြုံတွေ့။
မောရှေသည်ထာဝရဘုရားမိနျ့တျောမူသည်အတိုင်းသခင်ဘုရား၏ကျွန် "မောဘပြည်၌သေဆုံး, သူသည်မောဘပြည်ဗက် Pegor အနီးရှိချိုင့်၌သင်္ဂြိုဟ်ကြ၏သော်လည်းအဘယ်သူမျှအတိအကျသင်္ဂြိုဟ်ရာအရပျ (5-65Num 34 ။ ) သိတော်မူ၏။
သူသေဆုံးသောအခါသူတရာသည်အသက်နှစ်ဆယ်ကား, မိမိအသက်ရှိနေသော်လည်းသူဿုံကျန်းမာနှင့်ခိုင်ခံ့သောဖြစ်ခဲ့သည်။ ကမျြးစာက says:
(5 MOS 34 ။ : 7) "သူ့အမြင်အာရုံချို့ယွင်းမခံခဲ့ရမိမိအစွမ်းသတ္တိကိုဆုံးရှုံးခဲ့ရဘူး" ။
ပုံမှန်အသုဘမှာသင်တစ်ဦးသင်္ချိုင်းတွင်း၌တစ်ဦးသေဆုံးပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦး၌ထားလေ၏။ သို့ရာတွင်မောရှေသည်ထာဝရဘုရား၏စောင့်ရှောက်မှုကို ယူ. , အဘယ်သူမျှမဘယ်မှာသို့မဟုတ်မည်သို့ဖြစ်ပျက်ကိုသိခွင့်ရခဲ့သည်။
ဒါကြောင့်သင်္ဂြိုဟ်လေ၏မတိုင်မီသို့သော်လည်းအဘယ်သို့မောရှသေညျရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှဖွစျခဲ့သလဲ ကျမ်းစာ၌အဲဒီအကြောင်းဘာမှပြောပါတယ်? ယုဒငါတို့သည်ဖတ်ပါ,9တယျ:
သူကမောရှေ၏ခန္ဓာကိုယ်အကြောင်းကိုသူနှင့်အတူစစ် တိုက်. ရသောအခါ " ... ပင်မိုက်ကယ်မာရ်နတ်စွပ်စွဲသို့မဟုတ်သူ့ကိုကဲ့ရဲ့ဖို့မလျှောက်ဝံ့ကြဘူး။ သူကပဲ '' ထာဝရဘုရားသည်သင့်ကိုအပြစ်ပေးမည်။ '' ဟုပြောသည် "
မိက္ခေလနှင့်မောရှေကိုယျခန်ဓာကို၏ညာဘက်ပိုင်ရှင်ခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုမာရ်နတ်အကြားရန်ပွဲ။ သူသည်သင်္ချိုင်းတွင်း၌ခန္ဓာကိုယ်နေရာလိုချင်သောကွောငျ့မာရျနတျ, ထိုပြောဆိုထားသည်။ ဒါပေမယ့်မိုက်ကယ်ညွှန်ကြားခဲ့သညျ။ တဖန်မောရှေအားရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကောင်းကင်ဘုံကိုသွားလိမ့်မယ်။
ဟေဗြဲ၌တည်၏။ 2:14 ဤအခြေအနေတွင်ငျစိတျဝငျစားသောစကားလုံးဖြစ်ပါသည်:
"အမြိုးသားအအသွေးအသားကိုဆက်ဆံကတည်းကသူလည်းသူက (ယေရှု) သည်သူ၏အသေခံခြင်းဖြင့်သူသည်မိမိတန်ခိုးထဲမှာရှိခဲ့သေခြင်းတရားအာဏာမဲ့စေမည်ဟုအဘို့, အကြောင်း, မာရ်နတ်သည်အလားတူအတူတူပင်၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်" ။
" ... အသေခံမင်းသားဖယ်သေခြင်းတရားမှတဆင့်။ "
အသေသတ်ခြင်းကိုအထူးသဖြင့်မာရ်နတ်စည်းချက်နှင့်ဧရိယာဖြစ်ပါတယ်။ သူသည်သေမင်း၏အကြောင်းရင်းများတို့သည်ဤလောကသို့ကြွ လာ. , ထိုသူတို့၏အလောင်းများကိုဂရုစိုက်ဖို့လိုသည်နှင့်သင်္ချိုင်းသို့ငါဆောင်ခဲ့ဦးဖြစ်ခဲ့သည်။ မောရှေသည် '' ခန္ဓာကိုယ်ဖြစ်ခဲ့သည်။
1 ကော၌တည်၏။5ပေါလုမတရားသောမေထုန်၏လေးနက်သောပုံစံ၏ပြော၏။ မိမိအဘ၏မယားနှင့်အတူနေထိုင်ခဲ့သည်သူတစ်ဦးရှိခဲ့သည်။ တမန်တော်ပြင်းပြင်းထန်ထန်ကျမ်းပိုဒ် 3-5 ၌ဤဒုစရိုက်အပြစ်သည်ရေးပြစ်တင်ရှုတ်ချ:
"ငါ့ကိုသည်, ထိုဆက်ဆက်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာပျက်ကွက်ပေမယ့်၌စိတ်ဝိညာဉ်အားပစ္စုပ္ပန်ငါပစ္စုပ္ပန်ခဲ့ကြသည်သော်လည်းအဖြစ်ထားပြီး, ဒါပြုမူသောသူတို့၏အမျိုးအပြစ်တင်ရှုတ်ချခံရကြပါပြီဖြစ်ပါတယ်။